Sadarkaa dhaabaattii koreen tokkummaa fi ilaa fi ilaamee ABO jijjiramaan maqaan isaanii akka kanaa gadiitti ibsamee jira. – Welcome to bilisummaa
Sadarkaa dhaabaattii koreen tokkummaa fi ilaa fi ilaamee ABO jijjiramaan maqaan isaanii akka kanaa gadiitti ibsamee jira.
bilisummaa November 5, 2014	3 Comments
OROMO LIBERATION FRONT اورومـوحـرير اجبهۃ
Gaafa: Sadaasa/04/2014 Lakk.:008/2014
Date: Nov/04/2014 No.: 008/2014 رقم
Ibsa ABO jijjiramaa irraa kenname.
ABOn qabsoo Oromoo haala walxaxaa fi gufuulee edduu keessa darbee qabsoo ummata Oromoo sadarkaa bifa kamiinuu dubaatti deebi’uun hin danda’amneen gahee jira. Qabsoo yeroo dheeraa fi haarsaa guddaa gaafate, hoogganuudhaan sadarkaa dhalooti haarawaan bilisummaa fi mirga saba isaa galii isa maahiin gahuu danda’uun geessisee jira. Kun injifannoo guddaa dha. Qabsoon kana booda nu eeggatu, galii keenya isa maahii gahuuf sadarkaa qabsoo keenyaa haala dammaqiinsa dhaloota haarawaa fi guddina siyaasaa Oromootin wal simatutti olkaasuu nu barbaachisa.
Diina keenya bicuu bara baraan aangoo wal jijjiranii, imaamatuma wal fakkaataa Oromoo irraan gahaa jiran yeroo dhumaaf xumara itti gochuuf, hunda dura mooraa qabsoo Oromoo fi qabsa’otaa tokkoomsuun hojii alduree tokko malee hojachuu qabnuu dha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo, jaarmiyaa fi caasaaleen Oromoo, beektotii fi haayyonni Oromoo, akkasuma qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra jiruun gahuudhaan hoogganootiin gammeeyyii fi hooggansa dhaloota haarawaatti dabarfatan hundi, dhimma tokkummaa qabsoo Oromoo fi Oromoo irratti yeroo eddu dhaammataa turan amma gara hojiin jijjiruuf haalli dirqisiisan uumamee jira. Kana gochuuf dhaabbilleen siyaasaa Oromoo ilaalcha jibbiinsaa fi haaloo wal bahuu keessaa bahanii akka fedhii fi hawwii Oromoof abboomaman Addi Bilisummaa Oromoo gadi faggeessee waamicha isaa dabarsa. Haarsaa mooraa Oromoo tokkoomsuuf gaafatamu hunda alduree tokko malee ABOn jijjiramaa kaffaluuf qophii dha. Fedhiin kun kan ABO duwwaa otooo hin taane, dhimmi kun kan ilaalu dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi garee hunda kan ilaaluudha jennee amanna. Kana booda dhaaba keenya keessatti mooraa Oromoo tokkoomsuuf tarkaaffii haqaa fi fayidaa Oromoo irratti hutubame fudhachuuf qophii dha.
Garee fi dhaabbilee siyaasaa hawwii fi fedha diinaa of keessaa qabaniin ala, dhaabbilee Oromoo kamuu wajjin alduree tokko malee ilaa fi ilaameedhaan marii haqaa gochuun qabsoo keenya gara injifannoo isa maahiin gahuuf qophii dha. Murtee seena qabeessa kana irraa kaanee, koree ykn jila dhimma kana dhaaba keenya bakka buutee marii gaggeessitu sadarkaa dhaabaatti ijaarree jirra. Dhimmootiin mariif dhihaatanii fi qabiyyii marii kan ilaalu qajeelfamni gahaan koree kanaaf kennamee jira. Dhaabni keenya akka imaamataatti dhimma mooraa qabsoo oromoo tokkoomsuuf baafatee ture kana booddee gufuu tokko malee gara hojiitti hiika. Kanaaf akka ABO jijjiramaatti mooraa Oromoo tokkoomsuuf hundi keenya akka ilaa fi ilaameedhaan marii oromummaa godhannee, diina keenya hinkaa irratti fuulleffannu, akkasuma saba keenya gabrummaa jalaa akka baafnu gadi fageessinee waamicha goona.
B/G hayiluu Gonfaa
Qaasimi Abbaa Nashaa
Dr. Nuuroo Daddafoo HD­-ABO jijjiramaa
Tags Abo Dr.Nuuroo Daddafoo Jijjiiramaa
Previous Oromiyaa: Under the occupation of Tigrayan fascist regime
Next Seerri barreeffama Afaan Oromoo biyya keessaa fi alatti daandii garaagarummaa calaqqisu lama qabatee dagaagaa jiraachuu
“NAMA AKKA DIDE AKKUMA ISAA ITTI HIMUUN FALA TAYA.”
November 10, 2014 at 11:15am
Dr Nuuroo Daddafoo fi B/J/Hayluu Gonfaa eennu faa?
Gaafiin jettuu yoomiyyuu caalaa ammatti deebii barbaaddi fakkaatti.
Kana lafatti hin kaafne wanti akka kaafnu godhe akkaataa yaada, dalagaa fi laalcha jaraatti hidhata.
Tarii gaafiin biraa haga ammaa maa walitti himuu dhabne ? jettu asirratti akka kaatu mamaa hin qabu . Dhugama dura walitti himuu malle.San wanti hanqise akka Orommoon aadaan “nama ulfeessan /kabajan saree jala deemtu biratti hin dhayan”jedhu taanee J/Kamaal Galchuutti irkatuun tarii ilmi namaa amala jijjiiratuu dandayaa yaada jedhuun harka irra qabataa as geenne.
Amma ammoo eenyummaa jaraa akka Oromoon cufti beeku dura akkaataa namooma jara Dr Nuuroo fi J/Hayluu dhugaa jirtu akka armaa gadii kanatti hagoo qofa dhiyeessuun akkasumatti wal duraa-duubaan itti aansuun hawaasa keennaa ibsuun dirqamna.
Dr.NUUROO -Nama osoo beekkomsaa fi Ogummaa heeraa-heeraa namni marti maalalu qabu akka maraataa dalagu akka taate warri beeku “Doktareen hayyuu doofee akka Wayyaanee afaan malee gurra hin qabne faa ” jedhuun ibsa.
1-Gadaa Shanee tokkummaa hawaasa Oromoo diiguun warra hawaasa Arsii itti horuun ijibaachisee hangafaa fi hogganoota dhalootaan Arsii hawaasa biratti ololaan faaluun rakkisuu bira dabrsee gaafa tokko Obboo Hassan Husseen akka maraataa haada baafatee dhagaa guuratee biyya olaantummaan seeraa jiru Ameerikaa Minisootaa keessa daawitee konkolaataa irratti daake/caccabse himan.
2-Haadha warraa intala warra ulfinna qabuu aadaan kadhatuun biyyaa itti ergan eega ilmaan Lama-deette gaafa tokko akka nama tuqamee galee halkan ifaa fi CCTV kaameera dhaamsee akka ollaan 911 jedhan itti hin waamne uleen horoomaa baasee intalti gosatti himatuun bakkatti akka gadi dhiisu godhuun achumatti karratti deebisuun nama bitraatti heerumsiifatan jedhu.
3-Gaaddisa J/Kamaal Galchuu jala seenee qabeenna dhaabaa harka qabuun nammiin hawaasa Oromoo Arsii Gamaa-gamanaan /Baalee-Diida’aan/ gargar qooduun beekaman keessattu Keenya /Naayroobi fa’atti horii itti erguun.
4-Jila Qabsaawotaa irratti miseensota edduu Obboo Qaasim A/Nashaa waliin dhaabarraa dhiibuun gurmuun jaarsotaa fi hawaasa Arsii itti argee J/Q/ booda jara 2nuu teessuma hawaasa irratti Akka dhaabaa fi J/Kamaaliin biraa nama dhiibaa jirtu himatamuu ifaan itti himuun akka badirraa dhaabattu gorsuu odeefamaa ture.
B/J/Hayluu Gonfaa J/Hayluun akkuma ilmaan Oromoo roorroon lammii isaa itti dhagayamee qondaalotaa fi miseensota dhalootaan Oromoo waraana mootummaaToophiyaa keessatti dabaa fi roorroo wayyaaneen rawwaattu arguun harka lafa jalaatiin wal kakkassuu fi ijaarutti seenanii J/Kamaal Galchuu faa waliin ijaarame Osomaa akkasitti jiran gaafa tokko bakka tokkotti Jeneraalotaa fi Koloneellonni hedduu wal geettee akka itti deeman irratti marii godhame irratti yoo J/Kamaal ABOti dabalamuu yaada dhiyeessu warra OPCOti dabalamuu qabna yaada jedhu irratti hidha qabatee morme akka ture himan.
2-Gaafa J/Kamaal Galchuu faa namni tokko harka diinaa /wayyaanee seenuun icciitii baasuun murtii maayii tarkaanfiicabsanii biyya ollaa Ertiraa seenuu fudhatan J/Hayluu fi K/Gammachuu Ayyaanaa jalaa ganuun /didee biyya keessatti hafe. Eega J/Kamaalii fi gurmuun waraanaa wal dhuunfatuun cabsee Ertiraa seene Hoogganni ABO yoo saniittii fi Shaabiyaa ololaan dalagatuu yoo dhufuu diddan Wayyaannetti saaxillee akka qabamtan goona jedhuun sodaachifnaan Korojotti hoccuu guurattee karaa Keenyaa baqatuun Embaasii Ertiraa Naayroobii jiruun wanti marti /travel doccumenti/ kennameefii Asmaratti ergamuu nama maratuu beeka.
3-Asmaraa geennaan Obboo Daa’ud faa isa caalaa K/Gammachuu Ayyaanaa haada gandummaatii ufitti qabuun J/Kamaalii fi daraboota biratti akka maxxanu godhuun duuba Shanee hawatuu tattaafattullee gafaa tarkaanfii JIJJIIRAMA ABO fudhatamu J/Kamaal waliin gara tokko cabsatuun hawaasa Oromoo J/ABO barbaadu akka quudhuuf godhe. Garuu akkuma ODF ijaarmuun labsamee kaasee hogganaa fi miseensota keessa olola “Dhaabni kun dhaaba gosa tokkoo, Warra leellistoota Amantiii ISLAAMAA nu fakkeessaa, ODFn walitti dhiyaannaa jaraan walitti dabalamuu qabnaa fi kkf ” jedhuu faa oofurra ture.
4-Dirqama horii waliin karaa Dr. Nuuroo fi Obboo Qaasimiin J/Kamaaliin situu qabuu dandayaa jedhuun itti kennamee fi ergamu fudhatuun garee Dhaaba keessa wal ijaaruu seene.
5-Horii gareen buusii QBO /ABO jabeessuu hawaasa Oromoo Miseensotaa biyya amba jiran irraaa guuramee cinaan itti ergamu irratti akka ‘Passport’ n Toophiyaa bitamee ergamuuf godhuun yoo ‘VISA’ dhoofsifatuu Immigration Ertiraa dhaqu harkatti qabmuun hogganaa fi dhaaba keessa caalaa hawaasa horii irraa funaanu waaheloota harkaa ceetee gurra buutuun odeefamaa ture.
Namni hedduu yoo J/Hayluu akka fayyaallessa jara waliin jirtuun gowwoomee /dogoggoree fudhatuun gadduufiin dubbatu dhagaeenna garuu yoo seenaa gabaabaa eenyummaa J/Hayluu kana laallu akka nama ayyaan laallallattummaa /opportunist/ qabu hubatuun nama hin dhibiu.
C-Obboo Qaasim A/Nashaa Obboo Qaasim akkuma ilmaan Oromoo hedduu nama sirni gabroonfataa Abashaa /bara Dargii / abbaa abbaa lafaati jedhuun irraa ajjeesse Osoo bakka reeffa abbaa Dargiin bakka itti awwaalee /darbe/ sirnaan hin beekin gaddaan haaloofi gadoon akkasumatti dararaan guddatuun mudate.
Dhiibbaan akkuma lammii Oromoo hedduu mudate mudatuun silaa haaloogadoo fi goraa-morka itti bulchuu namuu herreguun hin hafu. Garuu akkaataan Obboo Qaasim eenyummaa faallaa kanaa /dadhabaa -weak personality akka asiin duubaa kanniin agarsiisaa.
1- Gumaa Dhiiga abbaa ufiituu osoo bishaan bulchitoota sirna Dargii fi hawaasa naannawaa abbaa ajjeesisuun /ajjeesuun hamatan hin jiiksin biyyaa baye.
2-Jiruu qananii jiraatuu malee akka laalaan /naatoo abbaa ufiituu hin qabne eega Dargiin diigame Wayyaanee biyya bulchuu jalqabde haswaasaan hawatuu naannaoo garaagaraaaatti awwaala namoota Dargiin fixee ifaa fi dhossaan tuutaan boolla tokkotti boorrataan dhoosee itti guuruun biyyee irra rare lafee yaaftee warri akka haaraya awwaalatu goote akka Lammii Oromoo biyya Ambaa jiru biraa dhaqee bakka lafee abbaa ijaan hin argine, hin awwaalanne.
3- Akkuma Dr. Nuuroo gaafa tokko inaaffaan haadha warraa aadaan itti kadhatuun itti ergamte halkan tokko mana balbala cufatee ifaa,CCTV, fi bilbila ufurraa dhaamsee Ameerikaa biyya ol aantummaa seeraatii fi nagaya biyya teennatti dhabne argannee tanatti uleen caccabse. Miidhama haga dhiiga dirmammuu dirratti guduunfamee yaalaan dadhabamee gosti akka mootummatti hin himanne niitii fi fira /obboleettii fi dhiiras/ waguun akka biyyatti erguun ogeessi aadaa koobaan irraa koobee /xuuxee deebite dhokataa miti.
4-Walumaa galaan nama bolola aangoo malee waa dalaguu hin dandeenne, Aangoon ABO “Baalabbaata’ dhaala itti fakkaattu gaafatama QBO /hoggana ABO baatuu dhiisii gafatama maatii /dhaloota uumaatuu hobbaafatuu akka hin dandeenne alagaa mitii firaa-fiixaan aanaa keessattuu ilman abbaa mana masaanuutiin holuun garaan itti gubatuu gariin abaaraa jiraatuu dhagayaa jirra.
Waayee namaa dubbatuun keessattuu fafa namooma diigu akkanatti himuun akka nama hundaa hingammachiifne ifa. Osoo dhara itti hin dabalin dhugaa jirurraa xiqqoo qofa ummanni Oromoo akka eenyummaa jaraa beeku itti himuu akkuma mata duree irratti eerame
“NAMA AKKA DIDE AKKUMA ISAA ITTI HIMUUN FALA TAYA.” jedhame osoo dadhabbii hagana caalaa itti gadin guurre dura haguma xiqqoo tanarra laallattuun akka sirna qabattu agarsiisuu akka Jaarmayaa /dhaabaa osoon taane akka nam-tokkeetti godhu asumaan hubachiisuun mishaa natti fakkaata.
!!!! injifannoon kan ummata Oromooti !!!!
Jachuma kana fi (Injifannoon ummata Oromoof) alabba oromotu wa arke, lubbun jolle biyaa kessa dhuma jirtulen billashi, soooo sad
Oromo akuma meshaa itt fayadamu male bua tokko hin qabnu. malif yo jatan, tplf oromo fayyadame ango qabachu fis irra tahu. Amas Amaharinis, olf jijjirama jee kanen walit qabate itt fayadamu dema ango arkachuf. please one thing i want to say stop blame anyone for your problem, because your, your own enemy.
Leave a Reply to zahara09 Cancel reply